काठमाडौं,प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानुजयन्तीका अवसरमा बोल्नुभएको शब्दलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्चालमा वहस शुरु भएको छ ।अयोध्या नेपालमा थियो कि भारतमा वा राम नेपाली हुन की भारतीय भन्ने बिषय यतिबेला गहन अध्ययनको बिषय बनेको छ । यसको समर्थनमा वा वि,रोधमा बृ,द्धिजीवि, लेखकहरुले यसको वास्तविकता के थियो ? भन्ने रहस्य खोजि गर्न थालेका छन् ।
गर्नुपर्ने काम नगरेर राम नाममा राष्ट्रवा,दी बन्न खोज्नु ओलीको कुप्रवृति हो, तर अ,योध्या प्रश्नमा ओली वि,रोधि हौवा चलाएर ईण्डियन चा,करी गर्न ज,रुरी छैन । मोदीले बुद्ध ईण्डियाको भन्दा केही नहुने, रामलाई ठोरीमा जोड्दा च,ट्याङ पर्ने ? ईण्डियासंग नेपालका स,मस्याका चाङहरु छन् तर सुल्झाउने प्रयास गर्ने कोही छैनन् । स,मस्या ए,कातिर हुन्छ तर बहस अर्कोतिर सोझ्याएर आफ्नो निकम्मापनलाई ओ,झेलमा पार्न खोज्ने धन्धा यहाँका दलालहरुको रा,जनीतिक पेशा हो ।
राम जन्मका बारेमा ओलीको बेमौसमी बाजाका रुपमा आएको कथाको वि,रोध गर्ने नाममा अर्कोथरी द,लालहरुले ओली वि,रोधि हौ,वा चलाएर कुर्सिका लागि ईण्डियन चा,करीमा ज्यान फाल्न थालेका छन् । राम र अ,योध्याको क,ल्पित कथाका पछि दौडेर कुर्सि दौडमा लागेका हनुमानहरुले, रा,जनीतिक उद्देश्य प्रे,रित भए पनि ओलीको कुरामा बहसको कुनै गुञ्जाईस छ कि छैन भनेर एक पटक सोंच्नु पथ्यो ।
एकजना ईण्डियन विद्वान SN Aryaले आफ्नो पुस्तक ‘Historicity of Ayodhya’ मा रामसंग जोडीएको अ,योध्या भन्ने ठाउँ पछाडी कल्पना गरिएको नाम भएको दा,बि गरेका छन् । चौथो सताब्दीमा लेखिएको कालीदासको र,घुबंशमा हालको अ,योध्यालाई साकेत नामले संबोधन गरिएको छ । यसको अर्थ हो, का,लीदासको रचनाकालसम्म पनि अ,योध्या नाम छैन । त्यही सताब्दीको गुप्त शासन कालमा स्कन्ध गुप्तले अयोध्या नाम राखेर प्र,चलनमा ल्याएको भन्ने भारतीय अ,नुसन्धान साहित्यमा भेटिन्छ ।
स्कन्ध गुप्त कालमा अयोध्या नाम राखिए पनि त्यो स्थान रामको जन्मस्थानका रुपमा मानिएको थिएन । Hans T. Bakkar का अनुसार इण्डियामा सताब्दीमा वैष्णव पन्थको उदय भएपछि त्यही वैष्णवपन्थ अं,गिकार गरेको गहडवा नामको राजबंशले एघारौं सताब्दीमा अयोध्यामा पहिलो पटक राम मन्दिर बनाएर त्यहाँ रामको जन्म भएको दा,बि गर्यो । उक्त राजबंश भन्दाअघि अयोध्यामा राम मन्दिर थिएन । सन् १२२६ मा त्यो ठाउँलाई अ,वधको राजधानी बनाईयो ।
बरु बौद्ध साहित्य महावस्तु र जैन साहित्यमा उल्लेख गरिए अनुसार गौतम बु,द्ध र महावीर जैन त्यस ठाउँमा बसेका थिए । तर यी दुबै साहित्यमा सो ठाउँको नाम अयोध्या लेखिएको छैन । चौथो सताब्दी भन्दा पहिले त्यस ठाउँलाई साकेत, कोशल नामले चिनिन्थ्यो । बुद्धभन्दा धेरै पछाडिका कौटील्य (चाकणक्य ) का रचनाहरूमा पनि त्यसको नाम कोशल नै छ ।
रामका पिता दशरथले शिकार खेल्दा श्रवणकुमारको ह,त्या गरेको भनिएको ठाउँ स्याङजा जिल्लामा छ । रामले सितालाई वनबास पठाएपछि बाल्मीकी ऋषिले रामसंग सिताको भेट गराएको ठाउँ चितवनको देवघाट हो भनेर मानिन्छ । रामको ईच्छाकु बंशकै उत्तराधिकारीहरु कपीलवस्तुमा आएर शाक्य बंशको शासन सुरु गरेको भन्ने कुरा इ,तिहासकारहरुका र,चनामा पढ्न पाईन्छ । सिताको स्वयंवरमा जाँदा रामले सुनसरी जिल्लामा धुनी बकालेर रात काटेको भन्ने मान्यतामा त्यहाँको यौटा ठाउँको नाम नै रामधुनी राखिएको छ । बाल्मिकी ऋषिको बसोबास पनि नेपालको नवलपरासी मानिन्छ । यी सबै वि,वरणहरुबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने रामको जन्मथलो कपीलवस्तु, देवघाट, स्याङ्गजा वा यतै वरिपरि रहेको हुनु पर्छ ।